Howlgalo lagu baadigoobayo maleeshiya leysay saraakiil ka tirsan Xoogga dalka ayaa ka… – Hagaag.com
Howlgalo lagu baadigoobayo maleeshiya leysay saraakiil ka tirsan Xoogga dalka ayaa ka…
Ciidanka Xoogga Dalka ayaa wada hawlgalo lagu baadigoobayo maleeshiyaad hubeysan oo gelinkii dambe ee Arbacadii Gobolka Galgaduud ku leysay Saraakiil ka tirsanaa Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka.
Axmed Shire Falagle, Wasiirka Warfaafinta Galmudug ayaa saaka sheegay in uu socdo baaritaan lagu baadigoobayo maleeshiyadaasi, si cadaaladda loo horkeeno.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug ayaa ka dhawaajiyay inaanan la garanayn heybta maleeshiyadaasi, hase yeeshee ay socdaan dadaalo l iskaga kaashanayo sidii lagu ogaan lahaa gacantana loogu soo dhigi lahaa.
“Lama ogaan karo waa xaajo ugub ah, aad ugub ugu ah deegaanka. Deegaanka ciidamo dowladdu leedahay oo dharka ciidamada loo yaqaano wata, marna jidadka looma galo, marka laga reebo Shabaab iyo wax kaloo sidaas ah. Dadka deegaanku maleeshiyaadyo waa jiraan oo habab beeleed isku haysta, laakiin ciidanka-kan, ciidanka dowladdu ahaa, in la laayay oo jidka loo galay uun baa hadda la ogyahay, waana xaajo ugub nagu ah.” Ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka ayaa yiri “Maaha ciidan habeysan oo meel inta ka soo weerar tagay oo lagu ogyahay, xitaa tirsigooda lama yaqaano, sababtoo ah dadkii sheegi lahaa waa dadkii ay laayeen, laakiin deegaanka oo dhan baa aad loogu baxay, dadka Soomaaliduna haddii la dhex galo aad xoogga loo saaro waa wax la dareemi karo, meeshii ay ka yimaadeen iyo waxay yihiinba. Marka saacadaha soo socdo ayaan la wadaagi doonnaa Warbaahinta, wixii shaqo ah oo amniga ay ka soo qabtaan.”
Falagle ayaa xusay inay xaqiijiyeen geerida shan Sarkaal iyo laba kale oo maqan, kuwaa oo aan nolol iyo geeri midna lagu hayn, sida uu yiri.
Saraakiishu waxay ka soo laabatay tababar Ciidanka Xoogga Dalka loogu soo xiray Xerada Harqaboobe ee Degmada Guriceel, waxaana wadada loo galay, xilli ay ku sii jeedeen Degmada Balanballe.